PSJTV | पिसाब पोल्छ ? यस्ता गम्भीर रोगको संकेत पनि हुन सक्छ !
पिसाब पोल्छ ? यस्ता गम्भीर रोगको संकेत पनि हुन सक्छ !
शरीरमा रहेका विषाक्त पदार्थ पिसाबका माध्यमबाट बाहिर निस्किन्छन्। पिसाब पोल्नु र पिसाब गर्दा पीडा हुनुजस्ता समस्याले अन्य धेरै रोगको संकेत गर्छ। पिसाब पोल्ने समस्या भएमा मूत्राशयमा पीडा हुने, पिसाब दुर्गन्धित हुने, पिसाबको रङ गाढा पहेँलो हुने, थोरै–थोरै पिसाब पटकपटक आउनेजस्ता समस्या हुने गर्छन्।
पुरुषको तुलनामा महिलामा पिसाब पोल्ने समस्या बढी हुन्छ। पाठेघरको मुख्य र मूत्रनलीजस्ता अंग एउटै ठाउँमा हुने भएकाले संक्रमण छिटै फैलिन्छ। यो जानकारी आजको नयाँ पत्रिकामा त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्रा.डा. उत्तम शर्माले दिएका हुन्।
सामान्यतया शरीरमा पानीको मात्रा कम भएमा पिसाब पोल्छ। जस्तै, गर्मी याममा शरीरबाट पानी अन्य माध्यमबाट पनि बाहिर जान्छन्। यसले गर्दा शरीरबाट विषाक्त वस्तु बाहिर ल्याउन प्रशस्त पानी चाहिन्छ।
विभिन्न संक्रमणका कारण पनि पिसाब पोल्ने समस्या हुन सक्छ। पिसाबथैलीमा पत्थरी हुनु पिसाब पोल्नुको मुख्य कारण हो। त्यस्तै, मिर्गाैलामा पत्थरी, मधुमेह, मेरुदण्डमा चोट र कलेजोसम्बन्धी समस्या हुँदा पनि पिसाब पोल्ने समस्या हुन्छ।
कतिपय अवस्थामा शरीरबाट पिसाब पूर्ण रूपमा बाहिर नआउँदासमेत पिसाब पोल्ने गर्छ। विभिन्न कारण पटकपटक पिसाब लागे पनि त्यसले पूर्णता पाउँदैन। पिसाबथैलीमा मासु पलाएमा पनि पिसाब पोल्ने वा दुख्ने गर्छ।
शरीमार पानीको मात्रा कम हुन दिनु हुँदैन। यदि कुनै रोगका कारण पिसाब पोल्ने समस्या भएको हो भने सम्बन्धित रोगको उपचार गर्नुपर्छ।
पिसाब पोल्ने समस्या कुनै जटिल रोगको लक्षण हुन सक्ने भएकाले समयमै उपचार गर्नुपर्छ। अन्यथा पिसाब पोल्ने समस्या पछि गएर जटिल रोग बन्न सक्छ।
नेकपाको स्कुलिङमा सी चिनफिङ विचारबारे क्लास
काठमाडौं : घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा प्रत्यक्ष रूपमा दलगत राजनीति सुरु भएको छ । उपकुलपति डा. संगीता भण्डारीको राजीनामा माग्दै सुरु भएको आन्दोलनको पक्षमा नेकपा उभिएको छ भने कांग्रेस विपक्षमा । प्रतिष्ठान बचाऔं ...
बलिउड अभिनेता सलमान खान ५० वर्षका भए। उमेर बढ्दै गए पनि उनी जल्दाबल्दा अभिनेतामा गनिन्छन्। सलमानसँग विवाह गर्न अहिले उनीभन्दा आधा उमेरका युवती पनि तयार छन्। अविवाहित भए पनि सलमानसँग प्रत्येक समय ...